Lionel Messi wuxuu iibsanayaa hotel 4 * ee Mallorca - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Lionel Messi wuxuu iibsanayaa hotel 4 * ee Mallorca
9 April 2019 ilaa 22: 46 by Thomas
Hada waxaa loo yaqaan 'Seasun Fona Hotel', laakiin waxay bedeli kartaa magaceeda hadda oo ay soo iibsatay Lionel Messi iyo kooxda Majeerteen.
Ku dhawaad ​​hal sanno inta ay joogsato ka dib marka aad iibsato meel kale Ibiza, Lionel Messi wuxuu ku darayaa hudheelkiisa ganacsigiisa. Wararkii ugu horeeyay ee ay soo baxaan Ultima Hora Barcelona, ​​weeraryahanka FC Barcelona ayaa soo gabagabeeyay bishii Febraayo ee soo iibinta hotelka Seasun Fona ee S'Illot, oo aan ka fogeyn Mallorca. Tani, iyada oo loo marayo shirkadda Explotaciones Rosotel oo ka dambeysa kubadda cagta Argentine.
Booqashada Seasun Fona, Hotel cusub ee Lionel Messi
Lionel Messi milkiilaha cusub ee hudheelka ee Balearic Islands
Waxay ahayd Vicente Miralles, oo ah milkiilihii hore ee goobta, kaas oo u xaqiijiyay wargeyska Isbaanishka. Ilaa wakhtigaa, dhismaha wuxuu lahaa afar xiddigood iyo qolalka 98 ee la heli karo waxay ku baahsan yihiin afar dabaq. Furitaanka waxaa loo qorsheeyey May 2 ee yimaada, laakiin shaqo culus ayaa la filayaa xilliga qaboobaha, si kor loogu qaado meel u dhow xiddigaha 5. Wargeyska Ultima Hora wuxuu ku dhawaaqay "maalgashi muhiim ah".
Hotel Hotel 3e oo uu soo iibsaday Lionel Messi oo ka tirsan kooxda Majestic
Beddelka magaca hotelka looma diidi karo. Lionel Messi waxaa lala xiriirinayaa kooxda Majaajilada, waxaana la yiraahdaa "MiM". Tani waa magaca labada shirkadood ee hore u leh La Pulga: Es Vive oo ku yaala Ibiza iyo markii ugu horeysay ee Sitgesee ku yaalla agagaarka Barcelona. Sida laga soo xigtay Vicente Miralles, maamulka ayaa loo dhiibay kooxda Majaajillo, sida Messi, Cristiano Ronaldo oo iskaashanaya Pestana Hotels.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.sportune.fr/plus-dargent/lionel-messi-achete-un-hotel-4-a-majorque-209378